Ninka ugu dheer qaarada Yurub Ibrahim Taqi oo ku nool nolol ka baxsan tan caadiga ah… – Hagaag.com
Ninka ugu dheer qaarada Yurub Ibrahim Taqi oo ku nool nolol ka baxsan tan caadiga ah…
Ibrahim Taqi oo heysta dhalashada Faransiiska oo asalkiisa ka soo jeeda Morocco oo 37 jir ah ahna ninka ugu dheer qaarada Yurub, waana qofka labaad ee dunida ugu dheer, dhererkiisa wuxuu gaarayaa 2.46 mitir, wuxuu wajahayaa nolol maalmeed ka baxsan tan caadiga ah oo mararka qaarna ah mid adag.
Wargeyska Faransiiska ee Le Figaro ayaa sheegay in Ibrahim uu si joogta ah uu u waayo qiyaasta dharkiisa ama kabahiisa oo loogu talagalay, wuxuu kabaha ka xirtaa numbarka 58, si uu u helo kabo noocaasi ah waa inuu bixiyaa 3500 euro.
Sidoo kale Ibrahim ayaan loo ogoleyn inuu raaco meter-owga lugihiisa oo dhaadheer awgii muddo seddax sano ah, sidoo kale ma jiraan gaari ku filan dhererkiisa, dowlada hoose ee magaalada uu deggen yahay ayaa ku wargelisay in ayna waxba ka qaban karin xaaladiisa.
Ibrahim ayaa sheegay in mararka qaar uu la kulmo faquuq oo uu u yahay dhibane xaaladaha qaar, wuxuu ka qeyb galay sanadkii shanaad oo xiriir ah xafladaha isu imaatinka dadka dhaadheer oo magaalada Paris soo abaabusho oo ay ka soo qeyb galaan dadka adduunka ugu jooga dheer si ay u muujiyaan in ay jiraan oo ay ka mid yihiin mujtamaca, waxay diraan fariin ah isu dulqaadka.
Wargeyska ayaa shaaca ka qaaday in Ibrahim Taqi uu bilaabay inuu deg deg dhererkiisu u koro markii uu jiray da’da 12 sano, taasi oo sabab u aheyd hormoonada koritaanka ee burada fiican ay si xad dhaaf ah u koreysay.
Taqi ayaa sheegay asaga oo dhoola cadeynaya, “Waxaan ka fekerayay waqtiga uu joogsan doono koritaanka, maantana waxaan noqday ninka ugu dheer dunida oo dhan.
Ibrahim ayaa ku nool guri loogu talagalay dhirirkiisa, saqafka guriga ayaa gaaraya seddax meter, wuxuu ku seexdaa sariir dhererkeedu yahy 2.80 meter, meesha uu ku meyrto dhererkeedu waa 2.50 meter.